Inde: Nanakiana Mavesatra Ny Fanomezana Maripankasitrahana An’i V.S. Naipaul Ilay Mpanoratra Tantara An-tsehatra Girish Karnad · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2012 23:22 GMT
Tokony niresaka mikasika ny asany manokana i Karnad, nefa naleony nampiasa ny fotoana nomen'ilay fetibe mba hanakianana ny maripankasitrahana an’ireo zava-bita hatrizay ho an’i Naipaul, ilay mpanoratra Trinidadiana-Britanika , izay nampangainy ho mpankahàla ny silamo.
Tany amin’ilay hetsika i Deepanjana Pal, ary nanoratra mitondra lohateny hoe “Ka dia nitroatra i Girish Karnad!”:
Tokony ho seho avo lenta mandritra ny ora iray no nataon’ilay mpanoratra tantara an-tsehatra Girish Karnad nefa lasa afomanganà 45 minitra izay nampiaka-tsetroka ny talen'ilay fetiben'ny Tata Litterature Live!, Anil Dharker sy nahaboramena ny mpanoratra Farrukh Dhondy izay naneho ny tsy fahafaliany no niafaràny. Raha tokony niresaka mikasika ny piesy nataony i Karnad dia nanao vakiteny namely ilay nahazo ny Loka Nobel VS Naipaul ho mankahàla ny Silamo, marenina sy tsy azo itokiana raha mbola Inde no resahina. Nambaran’i Karnad tamin’izany fa “tsy mahalala akory ny zava-bitan'ireo Miozolomana teo amin'ny tantaran’i Inde” i Naipaul. Nampanontany tena azy ny fahamarinan’ny tantara tena nisy tany Inde nosoratan’i Naipaul sady nolazainy hoe tsotra loatra ny fisainan’i Naipaul.
Tao anatin’ny resaka nataony dia nilaza i Karnad hoe:
Ankoatra ireo tantara fohiny, roa amin’ireo ihany no mitranga any Inde ary ratsy dia ratsy, telo kosa ireo boky mamirapiratra nosoratan'i Naipaul mikasika an'i Inde ka tsara– anisan’ireo mpanoratra amin'ny teny anglisy mahay indrindra amin’izao fotoana izy. Voalaza ho sahala amin’ny fitrandrahana mitohitohy ny firosoan’i Inde mankany amin'ny fandrosoana ireo boky ireo, kanefa ny manaitra indrindra amin’ilay boky voalohany, A Wounded Civilization (Sivilizasiôna maratra), dia ny fankahalàna mivandravandra ny Indiana Silamo. Ilay “maratra” ao amin’ny lohateny dia ilay nihatra tamin’i Inde nandritry ny fananiham-bohitra nataon'ny Babar. Nanomboka teo i Naipaul, isaky ny misy irika dia tsy nitsahatra ny niampanga azy ireo ho nanimba an’i Inde nandritry ny dimanjato taona, nitondra, anivon'ireo zava-doza indrindra tao aminy, fahantrana, ary nanimba ny voninahitry ny kolontsaina Indiana. […] Ho an'i Naipaul dia mijanona ho mpanani-bohitra mandrakizay ireo Indiana Silamo , voaheloka ho meloka mandrakizay, satria mpanani-bohitra ny razamben'ny sasany.
V.S. Naipaul eo am-pamakiana. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr caribbeanfreephoto (CC BY-NC-ND 2.0).
Nitsikera i Deepanjana Pal:
Efa fantatra tsara ary voatonona matetika ny fahaizan’i Naipaul mampiasa fehezanteny mahafinaritra, maranitra, mahitsy ary feno sary. Tsy misy mandà izany. Fa ny fanontaniana manitikitika, araka ny hevitro, izay mendrika hanontaniana dia ny hoe fihantsiana sa fanafintohinana ny hevitra “mifanohitra” ananany. Matetika ny olona manafangaro azy ireo nefa tsy tokony ampifamadihana. Tsy mitovy velively ny dikan’izy ireo. Ny hoe feno fihantsiana dia manaitra fihetseham-po, izany hoe mitady fihetseham-po maherihery. Anisan’ny fototry ny ankabeazan’ny zavakanto manga izy (hay vao, sarimihetsika, sary hosodoko; ny ankabeazan’ireny ) – Mampiady hevitra ny mpijery ary mahatonga azy hiasa saina. Ny manafintohina kosa anefa dia mahery sy maniratsira kokoa. Izany hoe manelingelina na mandratra olona fotsiny ianao. Raha mahavita mampihevitra ny olona ny fetiben'ny Tata Literature Live! fa hoe feno fihantsiana ireo hevitra “mifanohitr'i Naipaul”, dia arahabaina, satria efa nahatonga adihevitra foana i Naipaul (araka ny mahazatra). Na efa voalamina na tsy nahy, mendrika arahabaina ity fetibe ity noho ny fanomezany sehatra ho an'ireo hevitra tsy mitovy. Karnad, na eo aza izany, dia anatin'ny vondrona mino fa manafintohina fotsiny ihany i Naipaul.
Tao amin’ny Twitter, nifangaro ny fihetseham-po. Manohana an’i Karnad i Jaaved Jaaferi:
@jaavedjaaferi: HENJANA IANAO Mr. Girish Karnad nahavita nivatravatra tamin'ny fandalinana mikasika ny zava-mahamenatra fantatry ny rehetra momba an’i V.S.Naipaul tany amin’ny fetin’ny Literatiora tao Mumbai
Nahatsapa kosa i Oldtimer fa tsy nety ny nataon’i Karnad:
@auldtimer: Ny fomba fiainan’i Girish Karnad: Raha hasaina mba hiarahaba izy dia aleony manakiana ilay olona tokony ho arahabaina mba hisarihany ny sain’ny rehetraho any aminy samy irery.
Nihanihany i The Bad Doctor ka nilaza fa tsy misy henatra mihitsy i Karnad ka mety tsara raha mpanao politika:
@doctoratlarge: Sady tsy nisy lôjika no nahatsikaiky ratsy i Girish Karnad tao anatin’ny lahateny nataony ka mety tsara aminy raha mpitondra tenin’ny kongresy.
Nanamarika i Shiv Mishra fa tsy niteny i Karnad rehefa voatery niala tamin’ny Jaipur Literature Festival i Salman Rushdie tamin’ny Janoary, taorian’ny hetsi-panoherana nataon’andianà Silamo ary natahorana hatramin’ny ain’i Rushdie:
@mishrashiv: Narary tenda angaha i Girish Karnad tamin’ny fotoana tsy namelàna an’i Rushdie hiditra tao Jaipur?
Saingy nanahy kosa i Naresh Fernandes fa tsy mbola namaky ny bokiny mihitsy ireo mpiaro an’i Naipaul ao amin’i Twitter ireo:
@tajmahalfoxtrot: Gaga aho mahita ny isan'ireo mpiaro an'i Naipaul ao amin'ny Twitter. Lasa saina aho hoe firy amin’ireo izao no mba efa namaky ny bokiny.
@tajmahalfoxtrot: Tokony terena hamaky ny A Million Mutinies (hetsi-panoherana an-tapitrisa) ry zareo. Hahafantatra ny haratsian-toetrany manoloana an'i Inde ry zareo amin'izay.